IZim ifuna uwobungani neBafana | isiZulu
IZim ifuna uwobungani neBafana
INingizimu Afrika ijabulela umbhedo - Umbono
Owabe ekuBafana ugwetshelwe ukudayisa imidlalo
Sezihubela sakusha ngamathikithi owamanqamu
Johannesburg - IBafana Bafana isimenywe ukuba idlale neZimbabwe ngo-Ephreli 18 emdlalweni wobungani ozoba seHarare.
Inhlangano eyengamele ibhola eZimbabwe, iZimbabwe Football Association (ZIFA) inethemba lokuthi iSAFA izosamukelo isimemo somdlalo, okuhloswe ngawo ukugubha iminyaka engu-33 leliya lizwe lathola inkululeko.
“Manje akusafani nakuqala lapho khona amaqembu adlala kuPremiership ebencintisana ngendebe eyayaziwa nge-Independence Trophy, sizomema iqembu langaphandle elizodlala nama-Warriors,” kusho isikhulu esiphezulu se-ZIFA sitshela iThe Standard.
“Iningizimu Afrika yilona zwe esilimemile.”
Iqembu iBafana kanye neZimbabwe ngenyanga ezayo azodlala imidlalo yokuhlungela eyendebe yomhlaba ka-2014.
IZimbabwe, ehlule iBotswana ngo 2-1 muva nje kowobungani eHarare, izodlala neGibhithe, kuthi iBafana yona idlale neCentral African Republic.
Uma umdlalo wobungani phakathi kwalamaqembu womabili usuqinisekisiwe, umqeqeshi weBafana uGordon Igesund uzothola ithuba lokuhlola abadlali bakhe ngaphambi kowokuhlungwa.
Kodwa okwamanje akukacaci noma lo mdlalo uzoba khona noma cha.
“Okwamanje okukho okusezinhlelweni zethu okusho ukuthi sizoba nawo umdlalo neZimbabwe,” kusho umqondisi wezokuxhumana kwi-SAFA, uDominic Chimhavi, etshela iKickOff.com.